နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: Sweet December ရဲ့ မွေးနေ့ :)
Happy Birthday, sis Theingar!! Wish you all the best in your studies and in the new country.
ပျော်ရွှင်တဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေအမ.....။ ပြီးတော့ ချိုမြိန်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလေးဖြစ်ပါစေ....။ အမဧည့်ခံတဲ့ ဟင်းတွေ မုန့်တွေကို အကုန်အားပေးသွားတယ်...။ အားလုံးကိုကြိုက်တယ် ခုတလော ယူရိုပီယမ်အစာတွေကို ရူးသွပ်နေမိတာ...။
မသိင်္ဂါရေ.. ချိုသော မွှေးသော ဒီဇင်ဘာဖြစ်ပါစေနော်။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..း)
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ သိင်္ဂါ
ကျွေးထားတဲ့ မုန့်တွေက တကယ့်ကိုရှယ်ပါလားနော်..
ပညာသင်ခရီး ဖြောင်းဖြူးချောမွေ့ အဆင်ပြေပါစေ
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့လေးကို လာရောက်ပါတယ်နော်
ပျော်ရွှင်ပါစေ..ဒီနေ့စပြီး လိုချင်တိုင်း ဖြစ်နိုင် ရနိုင်ပါစေဗျာ
မွေးနေ့မှသည် နှစ် ၁၂၀ တိုင်ပါစေ.....
ထာဝရထက် တစ်ရက်ပိုပြီး ပျော်နိုင်ပါစေဗျာ..
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သာယာပါစေ
Happy Birthday sis. Be Happy day.
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးးး ..း) ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေ ..
မုန့်တွေကြည့်ပြီး ဗိုက်ဆာသွားပြီ ..
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပွဲလေးကို အချိန်မှီရောက်လာပြီး အားပေးသွားပါတယ် သိင်္ဂါကျော်ရေ။
မွေးနေ့ရက်မြတ်ကစလို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကြည်လင်စွာနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ
Happy Sweet December !!!
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်တိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
မမ ...ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့လေးမှသည် ရာသက်ပန်ပျော်ရွှင်ပါစေ ...
ချိူသော ဒီဇင်ဘာ မမသိင်္ဂါ...း)
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပျော်ရွှင်စွာ၊ ချိုသာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
အိုး...ဟိုး... စားပစ်ထည့်လိုက်တာ ဗိုက်ကြီးကို ဖောင်းကားသွားတာပဲ..။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့
ရက်မြတ်ဖြစ်ပါစေ..။ ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်ထဲကျပါစေလို့...။
Happy Birthday Belated ! ရှလွတ်..ရှလွတ်..ဂလု..ဂလု..